ASSIST ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။ - ASSIST ASEAN - အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ
ASSIST မှ ကြိုဆိုပါတယ်
ASSIST ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။
ASSIST တွင် အမေးများသည့် မေးခွန်းများ (FAQs)
ASSIST ၏ အဓိကလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
အာဆီယံကုန်သွယ်ရေးသုတဘဏ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ တာဝန်ယူထားသော အမျိုးသားကုန်သွယ်ရေးသုတဘဏ်တွေ၏ ကွန်ရက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အခြေပြု ဂိတ်ဝတစ်ခုဖြစ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့နေသည့်အချိန်၊ သို့မဟုတ် အခြား အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အချိန်များတွင် ကုန်သွယ်မှု ပြဿနာများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည့် အာဆီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အခမဲ့ သုံးနိုင်ပါမည်။
အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့် ခြေရာခံစနစ်နှင့် မီးပွိုင့်ကဲ့သို့အချက်ပြမီးတစ်ခုဖြစ်ကာ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများကို အွန်လိုင်းစီစဥ်ထားမှုများအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အကယ်၍ အာဆီယံစီးပွားအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အမည်မသိတိုင်ကြားလိုပါက အာဆီယံအခြေစိုက်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ သို့မဟုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ လုပ်ငန်းကောင်စီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အာဆီယံအခြေပြုရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ကဲ့သို့သော အခြားကိုယ်စားလှယ်ဌာနများမှတစ်ဆင့် အမည်မသိတိုင်ကြားလို့ရနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားချက်များ၏ အမျိုးအစားများနှင့်အရေအတွက်၊ ဖြေရှင်းပြီးသည့် ကိစ္စရပ်များ၏ နမူနာသာဓကများနှင့် အာဆီယံအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံမှ တုံ့ပြန်ချက်များကို (ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး) တင်ပြပေးထားနိုင်လောက်သည့် အများဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ASSIST အတွင်း အဓိကပတ်သက်နေသူများမှာ အဘယ်နည်း
အာဆီယံစီးပွာရေးလုပ်ငန်း (AE) - ယင်းသည် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမှု၊ စောဒကတက်မှု သို့မဟုတ် အရေးဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာသည့် အာဆီယံအခြေစိုက် လုပ်ငန်းစု( သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အာဆီယံအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တရားဝင်ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့)ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ တစ်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရပါမည်။ (ဥပမာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်)
ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ (CA) - အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် ASSIST ၏ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်။ ASSIST ၏ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများကြားရှိ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုအားလုံးသည် ဗဟိုညွှန်ကြားရေးမှူးမှတစ်ဆင့် သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် (HCP)- တိုင်ကြားသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု၏ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွင်ရှိသော (သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပင်မကုမ္ပဏီ ရှိသည့်နေရာရှိ) အမျိုးသားအဆင့်အစုအဖွဲ့ (ဥပမာ . ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်)။ ယင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ အေဂျင်စီ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသည် လိုအပ်ပါက ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ နှင့်/သို့မဟုတ် သွားမည်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် (DCP)- အာဆီယံလုပ်ငန်းစုမှ ကုန်သွယ်မှု ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရပြီး အရေးကိစ္စဖြစ်ပွားနေသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရှိ အမျိုးသားအဆင့်အစုအဖွဲ့ (ဥပမာ . ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်)။ ယင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အေဂျင်စီ သို့မဟုတ် အစိုးရဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် ASSIST အတွင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး အာဆီယံလုပ်ငန်းစုအတွက် အဖြေထုတ်ပေးလိုခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်သည့် အာဏပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ASSIST ၏ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုမှုအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။
တာဝန်ရှိသော အေဂျင်စီများ (RAs) - အရေးကိစ္စများအတွက် အဖြေရှာရန် တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည့် အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် အခြားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ။ ယင်းတို့သည် အရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပြီး အာစီယံလုပ်ငန်းစုမှ ကုန်သွယ်မှုပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှာ ထိရောက်မှုရှိသည့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် အာဆီယံ လုပ်ငန်းစုအား ၎င်းတို့ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဗဟို စီမံခန့်ခွဲသူတို့ထံမှာ တစ်ဆင့် ဖြစ်နိုင်သည့်အဖြေများကို အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
ASSIST မှ မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။
ASSIST သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အဓိက လုပ်ဆောင်သည့် ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်၍တွက်ခြေကိုက်သော လုပ်ငန်းစဥ်ကို အခြေခံထားပါသည်။
ASEAN လုပ်ငန်းစု (သို့မဟုတ် အမည်မသိ တိုင်ချက်ဖြင့် တိုင်မည်ဆိုပါက အာဆီယံအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုကို ကိုယ်စားပြုမည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့)မှ ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ တိုင်ချက်တစ်ခု ပေးပို့ပါသည်။
အကယ်၍ တိုင်ကြားသူမှ အမည်မသိစေဘဲ တိုင်ကြားလိုသည့် ဆန္ဒရှိပါက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားမှုကို ၎င်း၏ကိုယ်စား အာဆီယံအခြေစိုက် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တိုင်ကြားသူမှရွေးချယ်သော အာဆီယံအခြေစိုက် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားသည့် ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော အခြားကိုယ်စားပြုဌာနတစ်ခုခုမှ လုပ်ပေးရပါမည်။ ဒီကိစ္စတွင် တိုင်ချက်အား ဖိုင်တွဲရာ၌ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်ကြားသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု၏ အချက်အလက်များကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံ နှင့်/သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ဖော်ပြပေးစရာမလိုအပ်ပါ။ အမှုသည်ကိုယ်စား အာဆီယံအခြေစိုက် အသိအမှတ်ပြု ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ တိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့မည်ဆိုပါက အထူးစည်းမျဥ်းများကို ကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ တိုင်ချက်အား သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက တိုင်ချက်ပြန်လည်ပေးပို့ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု (သို့မဟုတ် အမည်မသိတိုင်ကြားထားခဲ့ပါက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း)ထံသို့ ပြန်၍ ပေးရနိုင်ပါသည်။
ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုပါက သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က တိုင်ချက်ကို ဖတ်ရှုသုံးသပ်ပြီး ယင်းအတွက် ASSIST သည် အကြံပြုရန် သင့်တော်သည့် ဖိုရမ်မဟုတ်ဟု ယူဆလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် ယင်းကိစ္စကို ကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းပေးလိုလျှင်ဖြစ်စေ ပယ်ချပစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ခဲ့ပါက ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်ကို ပေးပို့ပေးရပါမည်။
အကယ်၍ တိုင်ချက်ကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က လက်ခံလိုက်ပြီဆိုလျှင် ယင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ယင်းအရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား ရှာဖွေမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဖြေရှင်းချက်ကို အဆိုပြုနိုင်ပြီဆိုပါက ယင်းကို အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူမှ တစ်ဆင့် တိုင်ကြားသူ (ဥပမာ အာဆီယံလုပ်ငန်းစု သို့မဟုတ် အမည်မသိဖြင့် တိုင်ကြားထားပါက ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း)နှင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံ အသိပေးအကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးလျှင်
အာဆီယံလုပ်ငန်းစု (သို့မဟုတ် အမည်မသိဖြင့် တိုင်ကြားထားပါက ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း)မှ အဆိုပြုပေးသော ဖြေရှင်းချက်ကို လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ပြီး အခြားအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းပေးသည့် လမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေခြင်းများ လုပ်ပါလိမ့်မည်။
အာဆီယံလုပ်ငန်းစုများအနေဖြင့် လက်တွေ့ကျသည့် ဖြေရှင်းချက်များကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က တိုင်ချက်ကို လက်ခံပြီးသည့် ရက်စွဲမှစ၍ အလုပ်ရက် ၂၀ မှ အများဆုံး ရက် ၅၀ အတွင်း ASSIST မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်အားလုံးသည် တည်ရှိပြီးသား အာဆီယံသဘောတူညီချက်များ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေစည်းမျဥ်းများနှင့် အပြည့်အဝ လိုက်လျောညီညွတ်မှု ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ တိုင်ချက်ပေးပို့ခဲ့သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု (သို့မဟုတ် အမည်မသိတိုင်ချက်ဖြင့် ပေးပို့လာပါက ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း)မှ ရလဒ်ကို မကျေနပ်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ယင်းအရေးကိစ္စကို ၎င်းလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အာဆီယံစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအဖွဲ့အစည်း (ACB) သို့မဟုတ် အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံတိုးမြှင့် ယန္တရား(EDSM) ထံသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု(သို့မဟုတ် အမည်မသိတိုင်ချက်ဖြင့် တိုင်တန်းထားပါက ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့)သည် အာဆီယံအမျိုးသားတရားစီရင်ရေး နယ်များအတွင်း အမျိုးသားအဆင့် တရားတဘောင် သို့မဟုတ် အခြားအကြပ်အတည်း ဖြေရှင်းသည့် ယန္တရားများ(ဥပမာ ကြားဝင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ရင်ကြားစေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း)ကို လက်ကိုင်အသုံးပြုရန်လည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
တိုင်တန်းသူမှ ပေးပို့လာသည် အချက်အလက်များကို ASSIST အတွင်းနှင့် ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်သူများမှ သက်ဆိုင်ရာ ASSIST တိုင်ချက်ကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအရ အကဲဆတ်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လုံခြုံမှုရှိစေရန် လိုအပ်သည့် အဆင့်များအား အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်နေရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အချက်အလက်များကို ကွန်ရက်များမှ လွှဲပြောင်းပေးသည့်အခါ အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။